Ciidamada Kenya oo Loo Ogolaaday Qayb ka Noqoshada Ciidamada Amisom iyo Khilaaf Cusub – Rasaasa News
Ciidamada Kenya oo Loo Ogolaaday Qayb ka Noqoshada Ciidamada Amisom iyo Khilaaf Cusub
Mar 2, 2012 Ciidamada Kenya oo Loo Ogolaaday Qayb ka Noqoshada Ciidamada Amisom iyo Khilaaf Cusub
New York, Mar 3,2012 [ras] – Golaha amaanka Qaramada midoobay oo ogolaaday in ciidamada Kenya ay qayb ka noqdaan ciidamada nabad ilaalinta dalka Somaliya iyo khilaafyo ka imanaya doorka ciidamada Kenya ay ka galayaan ciimada Amisom.
Ciidamada Kenya ayaa Somaliya u galay kaliya ilaalinta danaha dalka Kenya, laakiin aan u galin dan ummada Somaliyeed. Ujeedadda laga dareemayo go,aanka dawlada Kenya oo ah in ciidankeedu ayna hoostagi doonin maamulka taliska ciidamada Amison iyo in ayna ciidamadeedu dhaafi doonin gabalka Jubada Hoose.
Dawlada Yugaandha ayay hore madaxdeedu shaki uga muujisay galintaanka ciidamada Kenya ee dalka Somaliya. Waxayna hore u sheegtay in Kenya ay u gashay Somaliya difaac kaliya, laakiin maanta ay ka mid noqotay ciidamada Amisom.
Ciidmada Burindhi iyo Yugaandha ayaa maamulka ciimada Amisom meerto ku wadaaga, wax dhibaato ahna ilaa iyo hada kama imanin.
Ciimada Ethiopia oo Somaliya ka qabta hawsha ugu muhiimsan ee la dagaalanka Al shabaab oo runtii la,aantood ay adkaan lahayd in laga adkaado Al shabaab ayaa hore u diiday in ay ka mid noqdaan ciimada Amisom.
Sida laga dareemayo dalalka ay ciidamadood joogaan dalka Somaliya waxaa waxaa jirta xurguf qarsoon oo u dhaxaysa dalalkan,taas oo ku salaysan dano u gaar ah.
Khilaaf iyo dano gaar ah oo aan dan u ahayn dalka iyo dadka Somaliya, waxay keeni doontaa in ay sii dheeraato colaada Somaliya iyo jiritaanka Al shabaab.
Arintaas oo la mid noqon doonta uun iskuhaysashadii Ethiopia iyo Eritrea ee dalka Somaliya.
Waxaynu isha ku hayn doonaa sida ay ugu heshiiyaan arimaha Somaliya dalalka Afrikaanka ah ee ay ciidamadoodu nabad ilaalinta u joogaan halkaas.